Osisi ọkụ na-ere ọkụ: ihe bụ isi nke yasenets na-eto eto n'ubi - Mkpụrụ ubi - 2020
Anyị na-eto eto yasenets
Ashen, ma ọ bụ ọkụ na-ere ọkụ, bụ osisi dị iche iche na-adịghị ahụkebe, na ọ bụrụ na achọrọ, nwere ike toro na ụlọ okpomọkụ gị. Otú ọ dị, iji malite bụ ịmatakwu banyere ya.
Esi lekọta osisi
Osisi ọkụ na Nchebe
Osisi na-ere ọkụ bụ osisi herbaceous nke nwere ogologo osisi, nke na-enweghị osisi na-enweghị alaka ihe dịka 70 cm. Ọ bụ nke ezinụlọ Rutov. Osisi ndị ahụ bụ nnukwu mgbịrịgba, na-ekpokọta ha n'ụdị dị iche iche: pink, white and purple.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ejikọta osisi ohia na-ereghị, jide n'aka na ị na-eyi uwe, ma ọ bụghị ntutu isi nke dị na fatịlaịza yasenets nwere ike ime ka akpụkpọ anụ.
Ọtụtụ mgbe, e nwere ụdị isi abụọ: Caucasian na white yasenets. Ya mere, Caucasus na-ebu elu na-erule 75-85 cm elu na-acha odo odo na-acha odo odo inflorescences nke na-egosi na June. Yasenets na-acha ọcha ruru 50-60 cm n'ịdị elu, okooko ya dị ọcha, ị pụkwara ịhụ ha na ọnwa abụọ mbụ nke oge okpomọkụ. Ka ọ na-erule August, na-enye mkpụrụ mbụ ya.
Ogologo (ma Caucasian na ọcha) adịghị oke mkparị ma na-enwe oké ike oyi oyi. Otú ọ dị, iji nwee osisi mara mma ma dị mma iji mee gị obi ụtọ ruo ọtụtụ afọ, ị ga-achọ ịma otú e si eto ya nke ọma. E nwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ọkụ na ala.
A na-ejikarị osisi ọgwụ ọjọọ eme ihe na nkà mmụta ọgwụ. Ọnụ ọgụgụ ha gụnyere: yasenets, wolfberry, uwe na-asa ahụ, crocus, mgbọrọgwụ, bred, rue.
N'okpuru ihe oriri (ya bụ, na ọdịdị), osisi ọkụ na-enwu ọkụ na-etolite ọtụtụ mgbe n'ọhịa na-egbuke egbuke, na nsọtụ, na mkpọda, ma ọ bụ n'ime ọhịa. Na-ahụ n'anya ma na-emeghe anyanwụ na ndochi anya. Ọmarịcha na-etolite na ndò nke osisi ndị ọzọ ma ọ bụ na-enweghị onwe ha. Ịnye ọkụ adịghị achọ. N'otu ebe ahụ nwere ike ịdị ndụ ruo afọ iri.
Ala kwesịrị ịbụ ìhè na drained drained. Na-eche dị mma na ala alkaline ma ọ bụ na-anọpụ iche. Maka yasenets, ala dara ogbenye ga-adị mma karịa ihe jupụtara na ihe ndị metụtara ihe oriri.
Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na mmiri nke mmiri ekwesịghị ịdị nso, n'ihi na ọkụ ọkụ anaghị amasị ala mmiri. Ya mere, nhọrọ dị mma ga-abụ ala, ájá na humus dịka 1: 2: 2.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na a ka na-eme ka ala mmiri dị n'ala, mgbe ahụ, drainage ga-abụ ihe dị mkpa n'oge akuku.
Osisi nke ohia oku ga - eme ka obi gi maa mma, ma oburu na i kuru ha n'uzo kwesiri. Ọ dị mkpa ịmata oge ịgha mkpụrụ, na otu esi eme ya nke ọma.
Agha na-akụ mkpụrụ osisi na-ere ọkụ n'ọhịa na-emeghe ka ha chara n'onwe. N'ihi ya, mkpụrụ germination ga-abụ nnọọ elu. A na-ahapụkwa ya ịgha mkpụrụ n'oge oyi ma ọ bụ na mmiri. Ọ bụrụ na ị na-akụ osisi Yasenitsa na ọdịda, ha ga-arịgo nanị otu afọ mgbe e mesịrị.
Ndị obere seedlings kwesịrị ịnọ n'obere ụlọ akwụkwọ (ma ọ bụ ụlọ griin, nke a na-akụ mkpụrụ). N'otu oge ahụ n'etiti ha na e kwesịrị inwe anya nke banyere 10-15 cm. Ya mere, a ga-etolite osisi maka afọ atọ, ma mgbe oge a gasịrị, a ga-akụ ha n'otu ebe. Mgbe nke ahụ gasịrị, osisi ọkụ ahụ na-ere ọkụ ga-eto n'otu ebe ruo ọtụtụ afọ, ọ gaghị akpata nsogbu dị ukwuu.
Ị ma? Na Georgia, a na-eji ahịhịa yasenets mee ihe na nri dị ka ose maka efere dị iche iche.
Ascender chọrọ ọ bụghị nanị na ọdịda mma, ma nlekọta kwesịrị ekwesị. N'okpuru ọnọdụ niile, ị ga-etolite okooko osisi mara mma, dịka na foto dị n'okpuru.
Osisi ahụ adịghị mma ịgbara mmiri, ma ị ga-amara na nnukwu mmiri nwere ike imetụta ọnọdụ ya. A ghaghị ịṅụ mmiri naanị n'ụbọchị oyi. N'ọnọdụ ndị ọzọ, a ghaghị ime ka mmiri sie ike.
Osisi ahụ anaghị achọsi ike na ala. Otú ọ dị, a ghaghị imegharị osisi gburugburu. Ọ dịghị mkpa iji kpoo mkpụrụ maka oyi, n'ihi na ọ ga-adị ukwuu n'okpuru snow.
Osisi na-ere ọkụ chọrọ nri nke na-eme ka ala dị ala. Ya mere, ị ga-eri nri osisi n'oge okooko: otu ugboro maọbụ ugboro abụọ. Ọ dị mma ka nri ndị ahụ sie ike.
Ịkwesiri ịkpachara anya n'osisi na-ere ọkụ, n'ihi na ọ dị ize ndụ karịsịa. A machibidoro ya ike imetụ ya aka, ị pụghị ọbụna ịnụ isi okooko osisi. Ihe ize ndụ bụ na ọ bụrụ na mmadụ emetụ ifuru, o nweghị ihe ọ bụla, ma mgbe awa iri gasịrị, akpụkpọ ahụ ga-amalite redden ma blisters na-apụta, mgbe nke ahụ gasịrị, a na-emepụta ọkụ nke abụọ. Oké ike na ike adịghị ike pụkwara ime. Eziokwu a bu eziokwu nke bu na sel nke osisi oku na-achoghi emetuta ihe di iche iche na agbawa aru.
Ị ma? A na-akpọ Ashen osisi na-enwusi onwe ya, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eweta egwuregwu na ifuru na ụbọchị ọkụ, ire ọkụ ga-enwu n'elu, osisi agaghịkwa ata ahụhụ. N'ụzọ dị otú a, a na-akpọ ogige ndị na-adịghị egbu egbu ọkụ.
N'ozuzu, yasenets bụ osisi nke ịma mma dị ịtụnanya nke dị mfe ilekọta. Ihe kachasị mkpa bụ idebe iwu nchekwa, mgbe ahụ, ifuru ahụ ga-atọ gị ụtọ na mma ya ruo ọtụtụ afọ.